Ny fitsanganan-ko velona na fitsanganana amin' ny maty dia ny fiverenan' ny efa maty ho amin' ny fiainana indray. Isan' ireo finoana lehiben' ny Kristiana ny fitsangana-ko velona. Ny fitsanganan' ny maty ho velona dia midika fa haharitra any amin' ny tontolo hafa ny fiainana ka mifandray amin' ny fitsarana farany hataon' Andriamanitra amin' ny olona rehetra izany. Ny olona nanao ny tsara araka ny didin' Andriamanitra fahavelony sy voavela heloka dia hitsangana ho amin' ny fiainana ao amin' ny Fanjakan' Andriamanitra izay torin' ny irak' Andriamanitra, indrindra ny Mesia. Ireo olona nanao ny ratsy sy tsy nibebaka dia halefa any amin' ny gehena na ny helo. Roa ihany ny olona fantatra araka ny Baiboly fa nanangana olona tamin' ny maty, dia i Elia mpaminany sy i Jesoa (na Jesosy).
Fitsanganan' olona maroHanova
Nitsangana tamin' ny maty i Jesoa tamin' ny marainan' ny andron' ny Paska jiosy taorian' ny fahafatesany tamin' ny nanomboana azy amin' ny hazo fijaliana; ary zava-dehibe indrindra amin' ny finoana kristiana izany satria antom-pisiany.
Misy filazana ao amin' ny Filazantsaran' i Matio (Mat. 27.52-53) izay manambara ny fitsanganan' ny olona maro ho velona toriana kelin' ny nitsanganan' i Jesoa tamin' ny maty:
"52 ary nisokatra ny fasana, ka maro ny fatin' ny olona masina izay efa nodi-mandry no natsangana, 53 ka nivoaka avy tao amin' ny fasana ireo taorian' ny nitsanganan' i Jesoa, dia nankao amin' ny Tanàna Masina ka niseho tamin' ny maro."
Ao amin' ny fanekem-pinoanaHanova
Ao amin' ny Fanekem-pinoana nikeanaHanova
Ao amin' ny Fanekem-pinoan' i AtanasioHanova
"Amin' ny fiaviany dia hitsangan-ko velona miaraka amin' ny vatany avy ny olombelona rehetra ka hampamoahina amin' ny asa nataony avy: ireo izay nanao ny tsara hankany amin' ny fiainana mandrakizay, ireo izay nanao ratsy any amin' ny afo mandrakizay."
Ao amin' ny Fanekem-pinoana apôstôlikaHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fitsanganan-ko_velona_(kristianisma)&oldid=1040508"
Dernière modification le 30 Novambra 2021, à 10:07
Voaova farany tamin'ny 30 Novambra 2021 amin'ny 10:07 ity pejy ity.